China X6 volomparasy fanamboarana sy orinasa | Teknolo-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
Fandrefesana tsy misy fifandraisana: Ny fisorohana ny fifandraisana mivantana amin'ny hoditra dia mahatonga ny fandrefesana ho azo antoka sy mahasalama kokoa, ary ny elanelana 5-8cm dia afaka misoroka ny aretina mikiky, ny handrina thermometatra tsy misy tohiny ho an'ny olon-dehibe.
Azo vakina ny Fahrenheit: Afaka misafidy mandrefy amin'ny fampiasana Fahrenheit na Celsius ianao. Ary koa afaka mampiasa an'io thermometre io handrefesana ny maripanan'ny vatan'olombelona na zavatra isan-karazany toy ny ronono, rano na efitrano.
Vakiteny haingana sy marina: Makà famakiana marina haingana ao anatin'ny 1 segondra ary ny valin'ny fandrefesana dia tena maneho ny hafanan'ny vatan'olombelona. Raha tsy misy fandidiana, dia hikatona ho azy aorian'ny 20 segondra, izay mitana andraikitra ambany amin'ny fanjifana herinaratra ambany.
Famolavolana mora: ny fisehoana mazava sy ny bokotra fandidiana dia mahatonga ny thermometer ho mora ampiasaina. Ny fampisehoana hazavana dia mety amin'ny fampiasana alina sy ny refin'ny mari-pana. Miaraka amin'ny tahony ahazoana aina sy vita amin'ny habe kely dia azonao alaina any amin'ny toerana rehetra.
Thermometer azo ianteherana: loko telo an'ny fisehoan'ny mari-pana mena maintso, raha manana tazo na maripana ambony ianao dia hisy bipan'ny thermometer infrared eo ho eo. Tsindrio "Mode" raha hiova amin'ny fandrefesana ny handrin'ny olombelona mankany amin'ny refin'ny Object.
Previous: X6 volondavenona
Manaraka: Basy mari-pana mialoha X5